WHO inozivisa chimbi chimbi cheUS $ 7.7 bhiriyoni yekumisa kusimuka kwakasiyana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » WHO inozivisa chimbi chimbi cheUS $ 7.7 bhiriyoni yekumisa kusimuka kwakasiyana
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • nhau • ushanyi • Trending Now • Akasiyana Nhau
COVID zvakasiyana zvipatara zvinotyisa zvakare
Nedzimwe nyaya dzeCOVID-19 dzakataurwa mumwedzi mishanu yekutanga ya5 kupfuura mugore ra2021 rose, nyika ichiri muchikamu chakakomba chehosha iyi - kunyangwe paine majekiseni ekudzivirira akawanda mune dzimwe nyika anodzivirira vanhu kubva kuzvirwere zvakakomba uye kufa.
Chikumbiro cheUS $ 7.7 bhiriyoni hachisi chekuwedzera mari inoda asi chiri chikamu cheAIT-Accelerator bhajeti rose ra2021, iro rinodiwa nekukurumidza mukati memwedzi mina inotevera kurwisa misiyano yeCOVID.
Kusakwana kwekuyedzwa uye yakaderera majekiseni ekudzivirira ari kuwedzera hutachiona hutachiona uye hwakanyanya hutongi hwemunharaunda masisitimu.
Mamiriro ezvinhu aripo arikusiya nyika yese ichinetseka kune misiyano mitsva.
Nyika zhinji dziri kusangana nemasaisai matsva ehutachiona - uye nepo nyika zhinji dzinotambira mari uye dzimwe nyika dzepakati-dzepakati dzakashandisa majekiseni akapararira, dzichiisa masisitimu akasimba ekuyedza munzvimbo, uye dzakaita kuti kurapwa kuwedzere kuwanikwa - mazhinji akaderera- uye akaderera-epakati -nyika dzenyika dziri kutambura kuwana maturusi akakosha nekuda kwekushaikwa kwemari uye zvekushandisa. World Health Organisation (WHO) yakazivisa kuti kuisa mari muITI-Accelerator kugadzira maturusi kune wese munhu, kwese kwese, kunobatsira nyika dzese kuburikidza nemhinduro yepasirese inosanganisirwa uye yakarongedzwa.
Iko Kuwana kwe COVID-19 Zvishandiso Accelerator (ACT-Accelerator) mubatanidzwa wepasirese wemasangano ari kugadzira uye kuendesa hutsva kuongororwa, kurapwa uye majekiseni anodiwa kupedza chikamu chakakomba chehosha. Uku kudyidzana kwakaumbwa pakutanga kwedenda mukupindura kudanwa kwevatungamiriri veG20 uye kwakatangwa muna Kubvumbi 2020 pachiitiko chakabatwa pamwe naDirector-General weWorld Health Organisation, Mutungamiri weFrance, Mutungamiriri we European Commission, uye iyo Bill & Melinda Gates Foundation. Mari inokosheswa yekuedza iyi inouya kubva mukuitika kusati kwamboitika kwevanopa, kusanganisira nyika, vega masangano, philanthropists, uye vanobatana nenyika dzakawanda.
Nepo gumi zvakasiyana zvekushushikana parizvino iri kutonga chirwere, pane kutya kuti nyowani, uye pamwe ine ngozi, misiyano yekunetseka inogona kubuda.
Neakaomeswa-akahwina mibairo yemwedzi mitatu yekupedzisira ari panjodzi, iyo ACT-Accelerator yaisa US $Kukwikwidza mabhiriyoni 7.7, iyo Rapid ACT-Accelerator Delta Kupindura (RADAR), kukurumidza:
Kuwedzera kuyedza: US $ 2.4 bhiriyoni yekuisa nyika dzese dzakaderera- uye dzakadzika-pakati-dzinowana mari munzira yekuwedzera kakapetwa kagumi muCOVID-19 kuyedza uye kuona nyika dzese dzichikwira kumatanho anoyedza anoyedza. Izvi zvichawedzera zvakanyanya kunzwisiswa kwemuno nepasirese kwekushanduka kwechirwere chirwere uye kusiana kwekushushikana, kuzivisa mashandisiro akakodzera ehutano hweveruzhinji uye nharaunda matanho uye kutyora ngetani dzekufambisa.
Chengetedza R & D kuedza kugara pamberi pehutachiona: US $ 1 bhiriyoni yeR & D iri kuenderera mberi, inogonesa kumisikidza kuumba uye kugadzira, rubatsiro rwehunyanzvi uye kudiwa kwekugadzirwa kuti vaone kuti bvunzo, marapirwo uye majekiseni anoramba achishanda achipesana nemusiyano weDelta uye zvimwe zviri kubuda, uye kuti anowanikwa uye anodhura kwaanodiwa.
Kero yakanyanya okisijeni inoda kuponesa hupenyu: US $ 1.2 bhiriyoni kuti ikurumidze kugadzirisa yakanyanya okisijeni inoda kurapa vanorwara zvakanyanya uye kudzora exponential kufa kwese kunokonzerwa neiyo Delta musiyano.
Kuburitsa maturusi: US $ 1.4 bhiriyoni yekubatsira nyika kuziva uye kugadzirisa makiyi emabhodhoro ekuti ishandiswe nekushandiswa kwezvose zvishandiso zveCOVID-19. Sekuwaniswa kweiyo COVID-19 majekiseni anokwira mumwedzi inotevera, mari inoshanduka ichave yakakosha kubatsira kuzadza pa-pasi-mabara ekuendesa.
Dzivirira vashandi vehutano hwepamberi: US $ 1.7 bhiriyoni yekupa mamirioni maviri vanokosha vevashandi vehutano vane PPE yakakwana yekuvachengetedza vakachengeteka pavanenge vachichengeta vanorwara, kudzivirira kuparara kwehurongwa hwehutano uko vashandi vehutano vatove nevashandi vashoma uye vatambanudzwa, uye kudzivirira kumwe kupararira kwe COVID-19.
Pamusoro pechikumbiro cheUS $ 7.7 bhiriyoni, pane mukana wekuchengetedza majekiseni kuburikidza nekushandisa sarudzo mukota yechina ya2021 yemamiriyoni mazana manomwe nemakumi matanhatu emishonga yekudzivirira kuti iwanikwe pakati pa760 kupfuura madhora akazara akatsigirwa neCOVAX kusvika kumagumo eQ2022 1. Kuzvipira kuchengetedza idzi nzira dzekudzivirira mukota yekupedzisira yegore yekuendesa pakati pa2022 kunogona kuitwa kuGavi / COVAX, sechikamu cheCIT-A network yemasangano.
Kuchengeterwa kwekudzivirira kwemamiriyoni mazana manomwe nemakumi matanhatu emishonga yekudzivirira nekushandisa sarudzo mukota yekupedzisira gore rino kuona kuti pane kuenderera mberi kupihwa kwekuendesa muna 760 kunoda mari inokwikwidza. Kuunzwa kweaya mazana manomwe nemakumi matanhatu emadhizau kuchada imwezve US $ 2022 bhiriyoni.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General weWHO, vakati: "US $ 7.7 bhiriyoni inodikanwa nekukurumidza kuti ishandise basa reCIT-Accelerator kugadzirisa dambudziko reDelta nekuisa nyika munzira yekumisa denda iri. Iyi yekudyara chikamu chidiki chemari iri kushandiswa nehurumende kubata neCOVID-19 uye inoita mutsika, hupfumi uye chirwere chepfungwa. "Kana mari idzi dzikasapihwa izvozvi kuti dzimise kufambiswa kweDelta munyika dzinotambura, pasina mubvunzo isu tese tinobhadhara mhedzisiro yegore."
Carl Bildt, Nhumwa Inokosha yeWHO kuAIT-Accelerator, akati: "Kupedza denda kunounza matirioni emadhora mukudzoka kwehupfumi nekuda kwekuwedzera kwehupfumi hwenyika uye kuderedzwa kwehurongwa hwekukurudzira kwehurumende kutarisana nedambudziko rezvehutano pamwe nemari iro COVID- 19 zvinokonzera. Hwindo rekuita ikozvino. ”
Iyo ACT-Accelerator ichangobva kuburitsa yayo Q2 2021 Dzokorora Mushumo, iyo inopa muongororwo wekufambira mberi kwakaitwa mukuunza maturusi ekuchengetedza COVID-19 maturusi kunyika dzepasirese, uye inosimbisa kuyedza kwakaitwa kuve nechokwadi chehurongwa hwehutano kugona kugamuchira nekugadzirisa zvizere kushandiswa kwe COVID-19 countermeasure, panguva Kubvumbi-kusvika-Chikumi 2021 nguva. Inotaridza mashandisirwo akaitwa iyo ACT-Accelerator akaendesa mhedzisiro uye kukanganisa mukurwisa COVID-19.
Kuwedzera hurukuro yepasirese uye zvirongwa zvitsva zvinoratidzira izvo zvakakosha kuti zvienzane mukurwa nedenda. Mumwedzi inopfuura gumi neshanu, na Nyamavhuvhu 15, 9, vanopa vakanga vasimuka ndokupa US $ 2021 bhiriyoni yeAIT-Accelerator's US $ 17.8 bhiriyoni inoda mari. Uku rupo rusingaenzaniswi rwakamhanyisa kuedza nekukurumidza uye kwakabatana kwazvo munhoroondo kugadzira maturusi ekudzivirira kuchengetedzeka kwehutano hwepasi rose, uye kuunza simba kwazvinonyanya kudikanwa.
Kubudirira pane ACT-Accelerator mbiru kunosanganisira:
Diagnostics mbiru, yakabatanidzwa neFIND uye neGlobal Fund, ichishanda pamwe chete neUNITAID, UNICEF, WHO uye vanopfuura makumi matatu vehukama hwepasi rose vehutano kuti vawedzere mukana wakaenzana weECVID-30 matekinoroji ekuongorora:
Anopfuura mamirioni makumi mana nemasere mamorekuru uye antigen ekukurumidza ekuongorora bvunzo (RDTs) akawanikwa kuburikidza neDiagnostics Consortium
Kugadzirwa kwenharaunda kwakapihwa kukurudzira kuburikidza nekuchinjisa tekinoroji
Nyika dzinopfuura makumi manomwe dzakatsigirwa kuwedzera zvivakwa zvevarabhoritari uye kuwedzera kuongororwa.
Therapeutics mbiru, yakabatanidzwa naWelcome, Unitaid, inotsigirwa neWHO, UNICEF neGlobal Fund ine:
Tsvaga mishonga inosvika US $ 37 miriyoni yekurapa kusanganisira 3 miriyoni doses ye dexamethasone, uye US $ 316 mamirioni anokosha e oxygen.
Tsigiro yakatsigirwa yeiyo yekutanga-inoponesa hupenyu kurapa kweECOVID-19 - dexamethasone - uye yakapa nhungamiro yepasirese pamashandisirwo ayo.
COVID-19 Oxygen Emergency Taskforce yakagadziriswa kuti iongorore uye kugadzirisa COVID-19 mapurazi mukuda kutapudza kufa kunodzivirirwa. Iyo mbiru zvakare yakaputsa chibvumirano chevatengesi vekurapa vepamhepo vepasi rose - Mhepo Liquide naLinde - kushanda pamwe chete neAIT-Accelerator vadyidzani pakuwedzera mukana weoksijeni munyika dzakaderera- nepasi-pakati-dzinowana mari. Kudiwa kwepasirese kwekurapwa kweoksijeni parizvino kwakapetwa kagumi zvakapetwa kupfuura denda risati raitika.
Kubva kutanga kwechirwere kusvika Chikunguru 1, 2021, inodarika US $ 97 miriyoni yezvakachengeterwa oksijeni (2.7 mamirioni ezvinhu) yakaendeswa kunyika.
Pamusoro pezvo, mukota yekupedzisira, US $ 219 mamirioni yakapihwa nyika kutengwa kwezvakachengeterwa oksijeni, zvinosanganisira oxygen concentrator uye itsva yeruzhinji oxygen michina, kuburikidza neGlobal Fund COVID-19 Response Mechanism.
COVAX, iyo Vaccines mbiru, yakabatanidzwa neCoalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, Vaccine Alliance neWorld Health Organisation (WHO) - vachishanda vakabatana neUNICEF semubatsiri mukuru wekushandisa, uye nevanogadzira majekiseni ekudzivirira zvirwere, masangano evagari, uye iyo World Bank ine:
Inokurumidzisa kutsvagisa nekusimudzira kweimwe portfolio yevatatu vavhoti vekutsvaga muzvikamu zvina zvetekinoroji.
Takatumirwa huwandu hwese hwemishonga yekudzivirira ye186.2 miriyoni kunyika zana nemakumi masere nesere pamwe nehupfumi (kubvira musi wa138 Nyamavhuvhu 5). Pakati peizvi, 2021 mamirioni emadhiza akatumirwa ku137.5 AMC nyika uye hupfumi. Zvinotarisirwa kuti huwandu huwandu hwemamirioni 84 huchave huchave hunotakurirwa panopera gore ra1.9. Pakati peavo, vatori vechikamu ve AMC vanotarisirwa kuwana madhora anosvika bhiriyoni nehafu, kusanganisira madhora akapihwa, zvakaenzana neinenge 2021% yehuwandu hwevanhu (kusanganisa India) .
Yakagadzwa Yekugadzira Task Force kuona uye kugadzirisa nyaya dzekugadzira dzinokanganisa kuwana kwakaringana majekiseni kuburikidza neCOVAX. The Taskforce iri kukurumidza kugadzirisa zvipingamupinyi zvenguva pfupi uye zvipingaidzo uye ichishanda pamwe nemubatanidzwa muSouth Africa kuendesa tekinoroji uye kumisikidza nzvimbo yekugadzira jekiseni mudunhu, ichiona kuchengetedza kwenguva refu kwenharaunda.
Hutano Systems Chibatanidzo, yakabatanidzwa neGlobal Fund, WHO neWorld Bank ine:
Pakupera kwaApril, akatengwa PPE yakakosha kudarika US $ 500 miriyoni, akaongorora nyika kugadzirira kuendesa majekiseni eECOVID-19 mune dzinopfuura nyika zana nemakumi mana (zvakabatana neWorld Bank, GFF, Gavi, Global Fund, UNICEF neWHO), uye zvakanyorwa kukanganisa. kune makumi mapfumbamwe muzana ehurongwa hwehutano nemasevhisi kuburikidza nerunyanzvi rwepasi rese rwekupfuura nyika zana.
Vakabatwa nyika-yakanangana nekuziva pazvinotadzisa uye kuenderera kwehutano masisitimu-ane hukama uye akagadzira epasirese mirairidzo uye kudzidziswa munzvimbo dzakawanda dzakakomba hutano system nzvimbo.
Yakabatsirwa kudzikisa mitengo yePPE, ichisvika 90% yekudzora mapikisi emasikisi ekurapa uye N95 / FFP2 kufema. Zvese zviri zviviri Global Fund, kuburikidza neCOVID-19 Response Mechanism (C19RM), uye Global Financing Facility, kuburikidza neCOVID-19 Essential Health Services, yakapa zvipo kunyika kuti dzitenge PPE, kugovera zvinodhaka uye kudzidzisa vashandi vehutano munharaunda mukubaya majekiseni simbisa iyo COVID-19 yenyika mhinduro.
PPE stock yakagara yakamisikidzwa neUNICEF munzvimbo dzekuchengetera muCopenhagen, Dubai, Panama neShanghai inowanikwa ipapo kuendesa kune nyika dzinoda, zvichienderana nekuwanikwa kwemari.